umdlavuza webele uwuhlobo emidlavuzeni eyandile phakathi izifo abesifazane. Umdlavuza kwenzeka webele kwezicubu iyakhula kwezinye izitho phakathi ukuthuthukiswa lesi sifo. Empini yokulwa nalesi sifo eziphawulwe ngenhla okunzima emazweni amaningi ufake usizo oluyilo ezinkantolo "Ibrans", ekhiqizwa yinkampani American "Pfizer".
The main isithako zomuthi is palbotsiklib yamemezela ngo-2013 njengoba izidakamizwa ngokuphelele entsha ukuze silwe umdlavuza metastatic. It is engamiswanga aphatha ngayo abesifazane postmenopausal ababengalwamukelanga ngaphambi ukwelashwa letindzala. Umthelela lokhu kwelashwa kungaba isikhathi izimpilo zeziguli ngaphandle ukuqhubeka kwesifo, nakho kakhulu kubambezela isikhathi isicelo ngamakhemikhali kanye therapy hormone.
Kuphi ungakwazi "Ibrans" ukuthenga eshibhile
Ngeshwa, izindleko amathuluzi echazwe akakwazi ukuba ukudanisa kulabo abayidingayo. Ngokwesibonelo, e "Ibrans" eMoscow amaphilisi Inani Setha ngaphakathi ruble 257 000. Kodwa ezimweni lapho izindleko nemithi ebalulekile kubonakale bayehluleka ngekwetimali, uzokwenza WWW.ONKO24.COM indawo. Inikeza ithuba ukuthenga imikhiqizo original at distributor amanani, kanye izinguqulo ejwayelekile izidakamizwa ezibizayo uma ayatholakala Indian emakethe.
Qaphela ukuthi izindleko ejwayelekile eqolo kodwa okuningi ngoba ayisasebenzi. Anakho ncamashi ketshezi asebenzayo efanayo, kodwa ukukhiqizwa yayo izindleko akufakwanga ukuthuthukiswa nokuhlonishwa kwemibhalo kwezindleko inkampani, okuyinto kwehlisa izindleko zokukhiqiza futhi, ngenxa yalokho, ukunciphisa intengo izidakamizwa.
Ngokusekelwe osekushiwo, singasho kugcwale umlomo ukuthi iqiniswe ejwayelekile "Ibrans" intengo yomkhiqizo akuyona uphawu ukuntula kwayo ukusebenza.
Phakathi kwalokho "Ibrans" izidakamizwa palbotsiklib libhekene ikhono ekuvimbeni umsebenzi enzyme okuthiwa kinases cyclin ancike (CDK), ekhuthaza cell ukukhula nokuhlukana. Lapho emdlavuzeni yomsebenzi kuholela yokuthi ukuthi amangqamuzana omdlavuza baqale ukuhlukanisa ezimathonsi.
Sebenzisa ukuchaza indlela ukulwa naso ngayo ekhaya eziphambili noma metastatic nomdlavuza wamabele kwabesifazane. Ngokuvamile, iqondiswa lihambisana letrozole e postmenopausal abesifazane iziguli ezine fulvestrant noma - iziguli lingaze ukuqhubekela phambili kwesifo, manifest emva kokwelashwa hormone.
Umjikelezo ukwelashwa izidakamizwa "Ibrans" izinsuku ezingu-28 (125 mg izidakamizwa kanye ngosuku) - Amaphilisi Abonayo ukuthatha 3 amaviki kulandele ngesonto ngesikhathi ukwenza ikhefu. Amaphilisi kufanele kuhlanganiswe ukudla, futhi ukukwenza kangcono ngesikhathi esifanayo.
Phakathi amaphilisi ukwelashwa "Ibrans" kukhona side effects ezithile. Ngokuvamile, lezi zibandakanya:
ekuthuthukiseni neutropenia (ongaphakeme amangqamuzana amhlophe egazi, isifo wokulwa);
anda nezinwele - Alopecia;
kwengozi izifo nokuthuthukisa.
Ngokuhlobene nanoma yikuphi ukuqokwa nokulawula ukusetshenziswa "Ibrans" ukulungiselela kumele kwenziwe nguchwepheshe onolwazi nge anticancer ejenti.
Yiziphi "Centrum" amavithamini? Izibuyekezo kanye Tips
"Rebilan": ukubuyekezwa, yokusetshenziswa, incazelo
"Bioselak": yokusetshenziswa zomuthi
Polyoxidonium: yokusetshenziswa kanye nencazelo mkhiqizo
Ukwenza impahla donative
Lapho kangcono uphumule Montenegro
Ukudla kwengane ezinyangeni ezingu-10 ngokufakelwa nokubeletha
Okufanele ukwenze nge willow ngemva Palm Sunday, lapho wasiletha?
Kanjani Mandala Umbala?
Ukuze uthole ukwaziswa mayelana nendlela ikhule anyanisi ezinhle
Efaka umquba peonies: Tricks Trade